Sida loo arko sawirkaaga astaanta Instagram -ka oo weyn | Madasha Mobile -ka
Sida loo arko sawirka ugu weyn ee astaanta Instagram
Ignacio Sala | 28/09/2021 22:00 | Instagram, Shabakadaha Bulshada
Instagram waxay noqotay sanado badan shabakad bulsheed, haddii aan u tixgelinno sidaas oo kale, inta badan loogu talagalay in lagu wadaago sawirrada nooc kasta, in kasta oo aan sidoo kale ka heli karno fiidiyowyo sheekooyinka Instagram. Isticmaalayaasha madashan ka dhigay hababkooda ugu weyn ee isgaarsiinta inta badan waxay fiiro gaar ah siiyaan sawirka astaanta u ah.
Haddii aad rabto fiiri sawirka astaanta weyn ee InstagramMaqaalkan waxaan ku tusaynaa dhammaan siyaabaha suurtagalka ah ee lagu gaari karo, adigoo adeegsanaya bogagga shabakadda ama codsiyada aan ku rakibi karno aaladdayada moobiilka gabi ahaanba lacag la'aan.
1 Sida loogu daro sawir astaan ​​ah barta Instagram
2 Sida loo beddelo sawirkaaga astaanta Instagram
3 Sida loo arko sawirka ugu weyn ee astaanta Instagram
3.4 Sawir Sawir Weyn ah
3.5 InsFull - sawir astaan ​​weyn leh
Sida loogu daro sawir astaan ​​ah barta Instagram
Haddii Instagram ay noqotay shabakadeena bulsheed ee ugu weyn, waa inaan fiiro gaar ah u yeelo sawirrada aan u isticmaalno astaanta guud. Markaan dooranno sawirka aan dooneyno inaan u isticmaalno sawir astaan ​​u ah, waxaan ku furi doonnaa dalabka Instagram aaladdayada mobilada waxaanna sameynaa tillaabooyinka hoose:
Markaan furno arjiga, guji sumadda matalaysa koontadeena, oo uu matalayo astaanta madaxa hoose ee arjiga.
Xagga sare, wax yar ka hooseeya magacayaga adeegsada ee madasha, the sawir madhan oo matalaya koontadeena.
Kadib guji calaamadda + ku yaal hoosta. Waqtigaas kamaradda qalabkayaga ayaa furi doonta si ay u qabato qabasho cusub.
Haddii aan rabno inaan isticmaalno sawir ku kaydsan aaladdayada, guji astaanta ku taal bidixda hoose ee shaashadda oo noo oggolaanaysa inaan helno album -ka sawirkeenna iyo waxaan dooranaa sawirka aan rabno.
Sida loo beddelo sawirkaaga astaanta Instagram
Habka loo beddelo sawirka astaanta Instagram waxay la mid tahay markaan rabno inaan ku darno sawir koontada.
Waxaan furaynaa arjiga oo gujineynaa astaanta u taagan koontadeena, oo uu matalayo astaanta madaxa oo ku taal geeska midig ee hoose ee arjiga.
Xagga sare, wax yar ka hooseeya magacayaga adeegsada ee madasha, sawirka aan haysanno xilligaas ayaa la muujinayaa.
Si aad u beddesho, guji calaamadda + ku taal xagga hoose. Kadibna kamaradda aaladdayada ayaa furi doonta si ay u qabato qabasho cusub.
Haddii aan rabno inaan adeegsanno sawir ku kaydsan aaladdayada, guji astaanta ku taal bidixda hoose ee shaashadda taas wuxuu na siinayaa marin u helka sawirrada ku kaydsan aaladdayada.
Marka xigta, waa inaan dhex marnaa albumka iyo dooro midka aan rabno inaan isticmaalno sida sawir cusub oo muuqaal ah.
Si ka duwan shabakadaha kale ee bulshada sida Twitter, haddii aan rabno inaan ku aragno muuqaalka astaanta astaanta weyn, waa inaan aragnaa guji sawirka si si toos ah loogu muujiyo cabbir buuxa.
Si kastaba ha ahaatee, shaqadan laguma heli karo barta Instagram (Sababaha macquulka ah ee aan loogu soo bandhigin shaqadan weligeed shirkaddu ma aysan shaacin) marka waxaan ku qasbannahay inaan adeegsanno bogagga shabakadda ama codsiyada dhinac saddexaad si aan u awoodno inaan aragno muuqaalka astaanta weyn ee Instagram.
Halkan waxaan ku tusaynaa barnaamijyada ugu fiican iyo bogagga shabakadda si loo ballaariyo cabbirka sawirka astaanta guud ee isticmaale kasta oo Instagram ah.
Marka hore, waa inaan maanka ku haynaa in codsiyada iyo bogagga shabakadda ee aan ku tusinno maqaalkan ay na tusi doonaan oo keliya sawirka astaanta guud ee ugu weyn ilaa astaanta guud waa mid guud. Haddii astaanta asturnaanta gaar loo leeyahay, waxaan illoobi karnaa dhammaan xalalkaan.
Ma jirto hab lagu awoodo in lagu galo oo lagu weyneeyo sawirka astaanta isticmaalaha koontadiisu gaar tahay.
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya ee aan haysanno fiiri sawirka astaanta guud koontada Instagram waa Save-Insta. Iyada oo loo marayo madalkan, waxaan sidoo kale ku daawan karnaa oo ku soo dejisan karnaa sawirrada Instagram, fiidiyowyo, giraangiro iyo sheekooyin.
Si aad u aragto sawirka astaanta Instagram-ka oo ka weyn oo, haddii aan rabno, ku soo dejisanno, Save-Insta, waa inaan fulinnaa tallaabooyinka soo socda, ama ka socda biraawsar mobiil ama desktop.
Marka hore, waa inaan gal bogga iyada oo loo marayo xiriirkan.
Kadib geli magaca xisaabta aaway sawirkii astaanta guud ee aan rabno inaan aragno ka weyn.
Markaan qorno magaca, guji badhanka View.
Ugu dambeyntii, sawirka astaanta ayaa la soo bandhigi doonaa,oo ay weheliso tirada dhejimaha, kuwa raacsan, iyo dadka koontadu raacdo. Haddii aan rabno inaan soo dejino sawirka, guji badhanka download.
IGDownloader waa madal kale oo waliba noo oggolaanaysa inaan ver oo soo dejiso sawirka astaanta guud si aad u weynaato. Si aad u aragto sawirka astaanta Instagram oo ka weyn IGDownloader, waa inaan raacnaa tillaabooyinka aan ku tuso hoosta:
Soo gal IGDownloader iyada oo loo marayo soo socda isku xirka.
Kadib waxaan galnaa magaca isticmaalaha sanduuqa raadinta oo ku dhufo geli.
Dhowr ilbiriqsi ka dib, sawirka astaanta ee koontada Instagram ayaa la soo bandhigi doonaa in aan soo bandhignay. Meel hoose, badhan ayaa loo soo bandhigay Download qalabkayaga.
Haddii aad rabto inaad soo dejiso oo aad aragto muuqaalka astaanta koontada Instagram ka weyn, mid kale oo ka mid ah xalalka laga heli karo internetka waa Instadp. Madalkani wuxuu kaloo noo oggolaanayaa inaan soo dejisanno sawirro, sheekooyin, fiidyowyo iyo gariirayaal lagu dhajiyay Instagram -ka ilaa inta koontada isticmaalaha ay tahay mid dadweyne.
Helitaanka Instadp iyada oo loo marayo soo socda isku xirka.
Markaas faylka astaantayada ayaa la tusi doonaa. Si aad u aragto sawirka weyn, guji badhanka Cabbirka Buuxda.
Dhowr ilbidhiqsi ka dib sawirka ayaa la soo bandhigi doonaa ku dhawaad shaashad buuxda oo leh badhan nagu martiqaadaya inaan soo dejino sawirka aaladdayada.
Sawir Sawir Weyn ah
Haddii aad doorbideyso inaad adeegsato codsi halkii aad ka isticmaali lahayd bogga internetka si aad u aragto oo u soo dejiso sawirrada astaanta weyn, waxaad ka faa'iideysan kartaa barnaamijka Sawirka Sawirka Weyn, codsi aan awoodno kala soo bax gabi ahaanba bilaashka ah Play Store.
Markaan furno arjiga, waxaan qornaa magaca isticmaalaha ee sawirka astaanta guud ee aan rabno inaan ku aragno cabbir weyn oo guji muraayadda weyneynta midigta.
Markaas sawirka astaanta guud ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda oo dhan. Si aad u soo dejiso, guji badhanka fallaadha hoose in aan ka helno wax ka hooseeya sawirka.
Developer: Sawirka Astaanta Weyn & Sawirka Profil Büyük
InsFull - sawir astaan ​​weyn leh
Si ka duwan dhammaan codsiyada iyo bogagga shabakadda ee aan ku tusay maqaalkan, oo leh InsFull waxaa lagama maarmaan ah in la galo koontadayada Instagram laga bilaabo arjiga laftiisa si loo helo muuqaalka astaanta aan raadinayno.
Hawlgalkeeda awgeed, waxay ku imaan kartaa oo kaliya haddii aan leenahay koonto Instagram, iyo haddii aan ku kalsoonahay inaan gelino xogta koontadayada Instagram dalabka. Haddii aan lahayn koonto Instagram ah, arjigan gabi ahaanba wax faa'ido ah noooma laha.
Developer: Fanrfan ŞENER
Ha filan inaad awoodi karto inaad kala soo baxdo sawirka astaanta isticmaaleyaasha kale qaraarkeedii hore, aad uga fog. Dhammaan aagagga aan ku xusay maqaalkan wuxuu na siiyaa xalka ugu sarreeya ee 150 × 150 pixels.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » Instagram » Sida loo arko sawirka ugu weyn ee astaanta Instagram
Dhammaan xeerarka Rocket League ee firfircoon oo la cusbooneysiiyay
Sida loo cusbooneysiiyo Fortnite nooca ugu dambeeyay